Australia waxay dib u furi doontaa xuduudkeeda si loogu safro socdaalayaal si buuxda loo tallaalay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Australia » Australia waxay dib u furi doontaa xuduudkeeda si loogu safro socdaalayaal si buuxda loo tallaalay
Airlines • Airport • Wararka Australia • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Nasashada qayb ahaan Australia ee xannibaadaha safarka ayaa imanaya in kasta oo ay tahay labadeeda magaalo ee ugu waaweyn, Melbourne iyo Sydney, iyo caasimaddeeda, Canberra, oo ku haray xiritaankii sababtuna tahay kororka kiisaska ka dhacay xarumaha magaalooyinkaas horaantii sanadka.
Dabcinta xannibaadaha ayaa muwaadiniinta u oggolaan doonta inay u safraan dibadda marka heerka tallaalka gobolkoodu gaaro 80%
Waqtigan xaadirka ah, dadku waxay awoodi karaan inay ka safraan Australia sababo aan caadi ahayn, oo ay ku jiraan shaqada lagama maarmaanka ah ama inay booqdaan xubin qoyska ka mid ah oo si xun u xanuunsan.
Ku noqoshada Australia hadda waxaa xaddiday kootooyinka imaanshaha ee adag oo kuwa ku laabanaya dalka waa inay maraan karantiil hotel oo khasab ah 14 maalmood.
Australia waxay markii hore xirtay xuduudkeeda bishii Maarso ee 2020, iyadoo ka mamnuucday muwaadiniinteeda iyo degganeyaasheeda inay u safraan dibadda iyagoon haysan oggolaansho rasmi ah waxayna ka tageen kumanaan Australiyaan ah oo ku xayiran dibadda.
Raiisel wasaaraha Australia Scott Morrison
"Waxaa la joogaa waqtigii dadka Australia dib loo siin lahaa noloshooda," ayuu yiri ra'iisul wasaaraha dalka Scott Morrison maanta, isagoo ku dhawaaqay Australia waxay bilaabi doontaa inay fududeyso xayiraadaha xadka ee daran ee ay soo saartay horaantii masiibada COVID-19, taasoo u oggolaaneysa muwaadiniinta la tallaalay inay u safraan caalamka.
Fududeynta xayiraadaha xudduudaha COVID-19 waxay u oggolaan doontaa muwaadiniinta Australia inay u safraan dibedda marka heerka tallaalka gobolkoodu uu gaaro 80%-yool loo dejiyay waddanka oo dhan si loo hubiyo in faafitaanka fayrasku uusan dhaafi doonin xarumaha caafimaadka.
Hadda, New South Wales waa gobolka ugu dhow marinkaas, oo loo qoondeeyay inuu ku gaaro toddobaadyo gudahood, halka Victoria la filayo inay noqoto tan labaad ee buuxisa shardiga.
Wakhtigan, dadku waxay awoodaan inay safraan oo kaliya Australia sababo aan caadi ahayn, oo ay ka mid tahay shaqo lagama maarmaan ah ama in la booqdo xubin qoyska ka mid ah oo si xun u xanuunsan. Ku noqoshada Australia waxaa xaddiday kootooyinka imaanshaha ee adag iyo kuwa ku soo laabanaya dalka waa inay maraan karantiil hotel oo khasab ah 14 maalmood.
Morrison wuxuu kaloo yiri, sidoo kale u fududeynta dadka la tallaalay inay safraan, cabbirka karantiilinta hoteelka-oo qiimihiisu yahay AUS $ 3,000 ($ 2,100)-ayaa la dhaawici doonaa oo lagu beddeli doonaa go'doomin toddobo maalmood ah oo guriga ah.
Dabacsanaanta isla markiiba ma khuseyso shaqsiyaadka ajnabiga ah ee soo galaya, in kasta oo dowladdu ay sheegtay inay ka shaqeyneyso sidii waddanku mar dhow “ugu soo dhaweyn lahaa dalxiisayaasha xeebaheena”.
AustraliaNasashada qayb ahaan ee xannibaadaha safarka ayaa imanaya in kasta oo ay tahay labadeeda magaalo ee ugu waaweyn, Melbourne iyo Sydney, iyo caasimaddeeda, Canberra, oo ku hadhay xannibaadda ka dib markii ay soo bateen kiisaska ka dhacay xarumaha magaalooyinkaas horaantii sanadka.